तपाईको ब्यक्तित्वका लागि रोयल इन्फिल्डको कुन बाइक उपयुक्त ? आफै थाहा पाउनुस् - Arthapage
तपाईको ब्यक्तित्वका लागि रोयल इन्फिल्डको कुन बाइक उपयुक्त ? आफै थाहा पाउनुस्
प्रकाशित मितिः January 8, 2020 January 8, 2020
यदि तपाई रोयल इन्फिल्ड बाइक खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, खरिद गर्नुभन्दा पहिला आफूलाई कुन इन्फिल्ड सुहाउँछ त्यसको जानकारी हुनु पर्छ ।
कम्पनीले फरक फरक क्षमताका धेरै रोयल इन्फिल्ड बाइक लन्च गरिसकेको छ । कम्पनीको करिब ९ प्रकारको बाइक हाल बजारमा उपलब्ध रहेको छ । आफ्नो ब्यक्तित्व अनुसारको रोयल इन्फिल्ड बाइक छान्नु चुनौतीको विषय हो ।
रोयल इन्फिल्ड क्लासिक
यदि तपाई सिटी राइडर हुनुहुन्छ र कहिलेकाही लामो दुरीको यात्राको लागि निस्कनु हुन्छ भने रोयल इन्फिल्ड क्लासिक सहरको सडकको लागि निकै उपयुक्त हुन्छ । क्लासिक बुलेटको आधुनकि भर्सन हो । रेट्रो मोडर्न लुक भएको छ यो बाइक । क्लासिक दुई इन्जिन ३५० सीसी र ५०० सीसीमा उपलब्ध रहेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड थन्डरबर्ड
क्रुजिङमा सोख राख्ने र लामो दुरीको यात्रा गर्न मन पराउने राइडरको लागि रोयल इन्फिल्डको थन्डरबर्ड निकै उपयुक्त हुन्छ । थन्डरबर्ड पहिलो क्रुजर बाइक हो । थन्डरबर्ड अलि हेभी बाइक हो र पहाडी बाटोमा यात्रा गर्न अलि कठिन हुन्छ । थन्डरबर्ड ३५० सीसी र ५०० सीसी इन्जिनमा उपलब्ध रहेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड थन्डरबर्ड एक्स
कलेज जानको लागि र शहरमा ड्राइभिङको लागि थन्डरबर्ड एक्स निकै उपयुक्त बाइक हो । सो बाइकमा फ्याक्ट्री फिटेड ब्ल्याक अलोय ह्विल रहेको छ । थन्डरबर्ड एक्समा सिटी बाइक क्रुजर दुबैको आनन्द लिन सकिन्छ । थन्डरबर्ड एक्स ३५० सीसी र ५०० सीसी इन्जिनमा उपलब्ध रहेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड बुलेट
रोयल इन्फिल्ड सिरिजको सो बाइक सबैभन्दा पुरानो बाइक मध्ये एक हो । र यसले आज पनि पुरानो बुलेटको लुक दिन्छ । यसलाई मोडर्न रेट्रो बाइक भनिन्छ । सो बाइक शहरी सडकको लागि उपयुक्त मानिन्छ । सो बाइक ३५० सीसी र ५०० सीसी इन्जिनमा उपलब्ध रहेको छ । शोरुममा पनि सो बाइक सबैभन्दा बढी बिक्री हुने बाइक हो र यो बाइक सबैभन्दा सस्तो पनि हो । सो बाइक शहरको लागि मात्र उपयुक्त मानिन्छ ।
रोयल इन्फिल्ड हिमालयन
एड्भेन्चरमा सोख राख्ने राइडरको लागि रोयल इन्फिल्डको हिमालयन निकै उपयुक्त मानिन्छ । हालै इन्फिल्डले हिमालयनमा केही परिवर्तन गरी लन्च गरेको थियो । हिमालयन सबैभन्दा सस्तो एड्भेन्चर बाइक हो । सो बाइकमा ४११ सीसीको इन्जिन जडान गरिएको छ जसले २३ बीएचपीको पावर दिन्छ । यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २२० एमएम रहेको छ । यसमा लगेजको लागि अलग सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
रोयल इन्फिल्ड बुलेट ट्रायल्स
यो बाइक भारतमा सस्तो स्क्र्याम्बल थिम भएको बाइक हो । रोयल इन्फिल्ड बुलेट ट्रायल्स हालै लन्च गरिएको थियो । सो बाइकमा ३५० सीसी र ५०० सीसीको इन्जिन समावेश गरिएको छ । दुबै इन्जिनको पावर र मेकानिकल क्षमता एउटै रहेको छ । एड्भेन्चरको लागि सोख राख्ने राइडरको लागि सो बाइक निकै लोकप्रिय रहेको छ । यसमा सामान राख्नको लागि पनि ठूलो ¥याक जडान गरिएको छ ।
रोयल इन्फिल्ड इन्टरसेप्टर
रोयल इन्फिल्डको इन्टरसेप्टर ट्विन सिलिन्डर भएको बाइक हो । यसलाई अल राउन्डर बाइक पनि भनिन्छ । इन्टरसेप्टर ६५० इन्फिल्डको नेक्स्ट जेनेरेशन बाइक हो । जसमा ६४८ सीसीको प्यारेलल ट्विन इन्जिन जडान गरिएको छ । जसले ७४ बीएचपीको पावर र ५२ एनएमको टर्क जेनेरेट गर्छ । लामो दुरीको यात्राको लागि सो बाइक निकै लोकप्रिय रहेको छ । यसमा विशेष स्लिपर क्लच पनि समावेश गरिएको छ ।
रोयल इन्फिल्ड कन्टिनेन्टल जीटी ६५०
रेट्रो लुक भएको स्टाइलिस क्याफे रेसर बाइकको लागि कन्टिनेन्टल जीटी ६५० राम्रो विकल्प रहेको छ । सो बाइकमा ६५० सीसीको इन्जिन समावेश गरिएको छ । जसले ट्विन जस्तै पावर जेनेरेट गर्छ । स्पोर्टी राइडर्सको लागि कन्टिनेन्टल जीटी ६५० राम्रो विकल्प रहेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड कस्टमाइज्ड
भीडभाडबाट अलग देख्नको लागि रोयल इन्फिल्ड कस्टमाइज्ड उपयुक्त रहेको छ । कम्पनीले पनि कस्टम ग्यारेजबाट टाइ अप गरेको छ । कम्पनीले मो पोवा र लक स्टक जस्तै विशेष फ्याक्ट्री कस्टम बाइक निर्माण गरेको छ । यसको साथै यसमा अन्य एसेसरिज पनि जडान गर्न सकिन्छ ।
रोयल इन्फिल्ड कास्ट आइरन
भिन्टेज लुक मनपराउने राइडरको लागि पुरानो कास्ट आइरन इन्फिल्ड उपयुक्त रहेको छ । हाल सो बाइक बजारमा उपलब्ध छैन ।
प्रकाशित मितिः 8:06:46 AM |
Prevकर्णालीका ४० वडालाई जडीबुटी जोन बनाइदैं
Nextऔद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह